Yintoni eyenziwa yi-SKM-Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Iinkonzo zobuchwephesha ziya kwenziwa kuyo yonke imiba, ukusuka kwinkqubo yokuthengisa kwangaphambili ukuya kwinkqubo yasemva kokuthengisa. Ngokwezixhobo zomthengi ngamnye kunye nezinto ezilindelweyo, sikunika iingcebiso kunye neenkonzo.
iingcali zinokunikela ngoqeqesho olwahlukileyo kulwakhiwo lwethu, okanye ngokuthe ngqo kumaziko wabathengi. Siqinisekisa ukuba abasebenzi bakho baziqonda kakuhle izixhobo ze-SKM ukuqinisekisa ukusebenza kwakho okuphezulu kunye nemveliso.
Sithetha ngezixhobo zakho. Ngayo yonke imilinganiselo eneenkcukacha kunye nohlolo, sikwazisa ngalo lonke uphuculo, ukulungiswa kunye nokugcinwa kwezixhobo zakho. Kwaye ngokulondolozwa kwethu, siqikelela zonke iingxaki ezinokubakho, nceda umatshini wakho usebenze kakuhle ngaphandle kokuphumla.
I-SKM inendawo yokugcina izinto ehlelwe kakuhle, onke amalungu afaneleke ngokupheleleyo kwaye alungele ukuthunyelwa naphina emhlabeni. Siqinisekisa elona xesha lifutshane lokuhambisa kunye nomgangatho ogqwesileyo. Umyalelo wendibano uya kuthunyelwa kunye neenxalenye zethu zokungcebeleka.
Ukubonelela ngeyona mveliso intle yokusebenza kubathengi bethu, iSKM ayeke ukusebenza ekuhlaziyeni nasekuphuculeni iimveliso zethu. Ngaphezulu kweminyaka eli-12 yamava ebaleni, siyingcali yokuphucula izibonelelo zakho zemisebenzi yakho ethile.